Enlight dia fampiharana manokana ho an'ny famerenana sary | Famoronana an-tserasera
Instagram dia tambajotra sosialy iray izay ankoatry ny fahaizan'ny media sosialy miharihary dia manome ihany koa izy safidy tena mahaliana ho an'ny famerenana sary, indrindra amin'ny inona ireo sivana manokana.
Fa raha te hanana fahaiza-manao mandroso kokoa amin'ny findainy iOS ny olona dia tsy maintsy manatona rindranasa hafa toa ny Enlight izy ireo. Enlight dia fampiharana izay afangaro ny retouching nomerika sy ny sivana maka sary fanovana amin'ny ambaratonga hafa amin'ny finday toy ny iPhone.
Miresaka isika fampiharana izay nofidina ho iray amin'ny taona 2015 ao amin'ny App Store any amin'ny firenena toa an'i Angletera, Alemana, Aostralia, Kanada na France, ary izay miavaka amin'ny fisian'ireo safidy fototra toy ny cropping na ny fametrahana filtre, mba hiroso amin'ireo izay mahaliana kokoa toy ny fifehezana mazava ny tonony, ny lokony ary ny antsipiriany.
Fitaovana manokana hafa mandalo ny fiasan'ny sarontava, famerenana ny fomban'ny fakan-tsary mahazatra, gradients misy feo roa na manampy effet monochrome. Izy io dia rindrambaiko izay tena manana fiasa vitsivitsy izay manavaka azy amin'ny hafa ao amin'ny App Store, toy ny Pixlr mahafinaritra.
Tsy afaka manadino ny momba azy koa isika fitaovana fampihenana ny tabataba, ovao ny zavatra sasany ao amin'ny sary na ny safidiny mihodina izay mamorona io vokatra manaitra io raha hainao ny mamerina mamorona amin'ireo safidy tsy mazava.
Fampiharana manokana ahafahan'ny mpampiasa mampiasa mahazo vokatra tsara indrindra rehefa manapa-kevitra ny hamerina hanatsara ny lafin'ny sary nalaina tamin'ny findainao iPhone ianao.
Ny vidiny ao amin'ny App Store dia $ 3,99 Ary amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny retouching sary avy amin'ny fitaovana iOS toy ny iPad na iPhone. Ka raha mitady fampiharana toa izany ianao dia aza mieritreritra be loatra momba izany, dia tsy ho diso fanantenana ianao.
Ampidino ny Enlight amin'ny iOS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Enlight dia fitaovana retouching sary mahery ho an'ny fitaovana iOS
'Doll' dia sary hosodoko nomerika nataon'i Kare Huang